Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaalla Ra'iisul Wasaaraha cusub? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaalla Ra’iisul Wasaaraha cusub?
Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaalla Ra’iisul Wasaaraha cusub?
Maxaa ka mid ah caqabadaha horyaala?
Magacaabidda rai’sul wasaaraha cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah oo uu dalka ku jira kala guur siyaasadeed.
Waxaa uu dalka ku jira xilli lagu wado in dalka Soomaaliya ay doorasho dadban ka dhacdo.
Waxaa shalay lagu heshiiyay qaabka loo marayo doorashada 2020 iyo 2021-ka.
Hadaba waxaa rai’sul wasaaraha cusub horyaala caqabada badan oo ay tahay in uu ka gudbo.
Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya ayaa rumaysan in ra’isul wasaaraha waxyaabaha ugu horeeya ee ay tahay in u fuliyo ay ka mid tahay dhaqangalinta heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda fedaraalka.
“Waxaa laga rabaa in uu fuliyo howla uu isaga hadda gadaal ka gaaray ayna ugu horeeyso heshiiskii hadda ugu dambeeyay ee salka ku haya doorashooyinka soo socda,” ayuu yiri Mr Rashiid.
Waxaa intaa ku daray in rai’sul wasaaraha cusub sidoo kale looga fadhiyo in uu isu keeno dhinacyada ku kala irdhoobay siyaadda oo uu isku dayo in uu mideeyo.
“Waxaa kale oo xiga in siyaasiyan dadka hadda kala irdhoobay oo siyaasadda isaga soo horjeeda inuu isu soo dhaweeyo gaar ahaan mucaaradka iyo dowladda in uu isu soo dhaweey,” ayuu yiri Mr Rashiid.
Rai’sul wasaaraha la magacabay Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa sidoo kale ay dad badan ka filayaan in uu hanto kalsoonida shacabka iyo saamileeyda dhanka siyaasadda.
“Waa in uu gogol xaar u sameeyo mustaqbalka dhaw arrimaha ku saabsan doorashooyiinka kalsooni na galiyo dadka kale ee banaanka taagan ee maanta daneynaya siyaasadda inay qeyb ka noqdaan markaa in uu howlahaasi oo dhan meelmariy,” ayuu yiri Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya.
Maqaal horeHirShabelle oo war ka soo saartay dilkii wasiir Nuur Xaashi Warsame
Maqaal XigaMuxuu CC Shakuur ka yiri magacaabida Ra’iisul wasaaraha cusub?